Nagu saabsan - Dalian River Lake Fishing Tackle Co., Ltd.
Dalian River Lake Kalluumaysiga Wax ka Qabashada Co., Ltd. waa shirkad isku dhafan R&D, naqshadeyn, wax soo saar iyo iibin. Badeecadaheena ugu weyn waxaa laga iibiyaa aalado ganacsi oo heer caalami ah oo kala duwan. Waxaan leenahay ku dhawaad ​​10 sano oo waayo -aragnimo guul leh xagga ganacsiga internetka. Macaamiishayadu waxay ka yimaadaan Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Yurub, Australia, Koonfur -bari Aasiya iyo dalal iyo gobollo kale. Alaabooyinkayaga ugu waaweyn waxaa ka mid ah: usha dhaldhalaalka kalluumaysiga, soo jiidashada kalluumaysiga, jillaab kalluumaysigaLine khadka kalluumaysiga tool aaladda kalluumaysiga accessories qalabka kalluumaysiga iyo alaabta kale ee qalabka kalluumaysiga. Dhammaan alaabtayada, waxaan aad ugu tartamaynaa qiimaha iyo waxqabadka.
Waxaan leenahay sumcad wanaagsan si aan u siinno farsamada gacanta iyo adeeg tayo leh qiimo macquul ah. Hadafkeenu waa xaalad guul wada leh oo u dhaxaysa iibsadayaasha iyo annaga.
Muunad degdeg ah
Sida sed kalluumaysiga. Soo -saare xirfadle ah oo ka badan 500+ qaabab khiyaano leh, waxaan leenahay aqoon -isweydaarsi wax -soo -saar oo ah 10,000+ mitir murabac iyo 180+ shaqaale xirfad leh. Waxaan macaamiisha siinnaa qiimayaal warshadii hore iyo alaab tayo sare leh, kuwaas oo dhammaantood waafaqsan heerarka caalamiga ah, shaybaarkana si dhakhso leh ayaa loo bixin karaa wakhti kasta.
Baakado ammaan ah
Habka baakadeyntayadu waxay u dhigantaa habka baakadaha hawada ku habboon ee ganacsiga caalamiga ah. Waxaan u isticmaalnaa bacaha xumbo tayo sare leh iyo kartoonada guud sida alaabta. Macluumaad faahfaahsan, fadlan noo soo dir dib -u -eegid.
Tayada ayaa ah aasaaska meheraddeena onlaynka ah, oo ay ku xigto hufnaan iyo qiimayaal tartan ah. Waxaan kuugu adeegi doonaa tayada ugu fiican iyo xawaaraha ugu dhaqsaha badan, had iyo jeerna ku salaysan daacadnimo iyo macaamil-doon. Macaamiisha adduunka oo dhan! Fadlan nala soo xiriir, waayo si kal iyo laab ah ayaan kuu soo dhaweynaynaa. Fadlan nala soo xiriir, sababtoo ah waxaan si dhab ah u rajaynaynaa inaan kula shaqeyno!